Ubuhle - Wikipedia
UBuhle ziimpawu eziphawuleka kwizinto ezithile. Intle into xa imnandi, ukuyijonga nje, ukuyiva, ukuyibamba nje, ukuyingcamla, ivumba layo, okanye ukucinga ngayo. Isichasanisi sobuhle b[ububi]]. ikwaligama lendlela ova ngayo ndlela leyo ekunzima ukuyichaza. Ubunjani bale ndlela yovakalelo yahlukile kubantu ngabantu ngokwamasiko abantu ngokwahlukana kwawo. Akwaziwa okokuba ngabantu kuphela na abanalo oluvakalelo.
Mininzi ke imibono emalunga nokokuba buyintoni na ubuhle. Abanye abantu bathi ubuhle:
ziimpawu ezifanayo phakathi kwento eyiyo ngokwendalo nento eyenziwe ngobuchule bezandla. Umzekelo, umfanekiso omhle ngulowo obonakala ngathi yinto ephilayo.
iimpawu ezifanayo phakathi kwayo nayiphi na into nento ocinga okokuba imelwe kukubonakala injani okanye iyintoni. Umzekelo, umthi omhle umelwe kukuba ngulowo onesiqu esime nzdu esingqale ngqo phezulu sikwamdaka ngokombala]] ubenamagqabi amaninzi aluhlaza yaka, okanye amafu amahle angangala amhlophe nabonakala entofontofo ngathi wulu).
Indlela into esiyibonayo esenza sizive ngayo: sonwabile, silusizi, sinomsindo, okanye nayiphi na imeko esinokuziva sikuyo ngokwasemoyeni. umzekelo, intwana nje yomculo kungayiyo eyenza abantu bazive bonwabe kakhulu okanye belusizi kakhulu.
Ubunjani bento. umzekelo, ibali elimnandi lisenokuba libhalwe kakuhle.
mininzi ke imibono. Ezinye izinto abathi abanti zintle azinakuchazwa nangomnye umbono kule.
Eli khasi lagqityelwa ukulungiswa kwi-31 EyoKwindla 2015, kwi-08:45